Wararka Gudaha – Page 2 – Shabakadda Amiirnuur
SARKAAL MUQDISHO LAGU DILAY.
Korneyl Cusmaan Shariif Xasan oo ka tirsanaa Dowladda federaalka ah ayaa Xalay lagu dilay Deggmada Kaaraan ee Magaalada Muqdisho. Rag hubeysan ayaa la sheegay in ay Sarkaalkaan Gurigiisa ugu galeen kadibna ku dhex dileen sida wararka aanu heleyno sheegayaan. Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegatay Mas’uuliyadda dilkaan ka dhacay Degmada kaaraan […]
qarax askar jubba land lagu laayay iyo Burundiga iyo Maamulka Hir shabeele oo shabeelaha dhexe lagu weeraray
ugu yaraaan shan askeri oo ka tirsanaa Ciidamada Maamul Gobaleedka Jubbaldn ayaa Saaka ku ku naf waayay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Afmadow ee Gobalka Jubada hoose kadib markii qarax halkaa ku haleelay. sadax kale oo ka tirsanaa Ciidamada Jubbaland ayaa dhaawacyo soo gaareen qaraxa waxaana suura gal ah in khsaaruhu […]
Mu’assasada Al-kataib oo baahisay juzka labaad xalqada lixaad ee tixanaha Furimaha Cizziga.
Garabka warbaahineed ee Alkataaib ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa baahiyay filim cusub oo muujinaya dagaalo Meelo kala duwan ka dhacay, hoos ka daawo filimka Halkan Ka Daawo Filimka Cusub Halkan Ka Degso Filimka cusub. Halkan Ka Doono Linkiyo Fara Badan.
Sawiro:-Sarkaal caan ahaa oo Muqdisho lagu dilay.
Sarkaal caan ahaa oo ka tirsanaa Dowladda Federaalka ah ayaa Maanta lagu dilay Xafadda Sey biyaano ee Degmada Hodon ee Magaalada Muqdisho. Gaashaanle dhexe Mahad Doolar oo xilal dhanka Ciidanka ah ka soo qabtay Gobalka Banaadir waxaa dilkiisa sheegatay Xarakada Shababul Mujaahidiin oo uu ka mid ahaa dadka dagaalku kala […]
QARAXYO KA DHACAY MUQDISHO BAYDHABO IYO KISMAAYO,
Qaraxyo kala duwan ayaa maanta ka dhacay Magaalooyinka Muqdisho Baydhabo iyo Kismaayo kuwaasoo khasaarooyin lagu gaarsiiyay xubno ka kala tirsanaa Dowladda Federaalka ah iyo Maamul Gobaleedyada Jubbaldn iyo Koofur Galbeed. Qaraxa ak dhacay Byadhaboa aya laa beegsaday Gudoomiyaha Gobalka Baay Cali Wardheere waxaana la sheegayaa in uu ka bad baaday […]
Dagaalo Baydhabo ka dhacay
Ciidamo ka tirsan Xaraada Shabaabul Mujaahdiin ayaa Xalay Weeraray Ciidamo ku sugan koontarool ku yaala duleedka Magaalada Byadhabo waxaana halkaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay iyaga iyo Ciidamada Maamulka Koofur Galbeed ee Itoobiyaanka wada shaqeynta la leh. dagaalka ayaa mudda socday taasuna waxay sababtay in Ciidamada la soo weeraray u […]
qarax iyo weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo Buurane ka dhacay.
ugu yaraan laba askeri oo ka tirsanaa Ciidamada Maamulka Hirsahbeelle ayaa ku dhintay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax Maanta Barqadii ka dhacay Deegaanka Buurane ee Gobalka Shabeelaha dhexe iyadoo afar kalena ay ku dhaawacmeen. afarta Qaraxa ku dhaawacmay waxaan ku jira Taliyihii Ciidamada Buurane jooga iyo Nin kale […]
Daawo filimka Cusub Furimaha Cizziga Qeybta Lixaad – Juzka 1aad
Garabka Warbaahineed Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab ee Alkataaib ayaa baahiyay filim xiiso badan oo muujinaya dagaalo Ciidamada Alshabaab ka galeen Gobalo kala duwan oo Soomaaliya ah. Filimka waxaa ka soo muuqanaya hogaamiyaal Shihiiday iyo kuwa nool oo dardaarano kala dwuan jeedinaya. ▪️ Juzka 1aad – Akhlaaqda Mujaahidka ▪️ Halkan […]
Alkataa’ib oo baahisay Sawirrada weerarkii lagu xasuuqay maleeshiyaatka dowladda ee deegaanka Bariire (DAAWO)
Mu’asasada Alkataa’ib ayaa baahisay sawiro argagax badan oo soo bandhigaya xasuuqii maleeshiyaatka Soomaalida ku qabsaday saldhigga Bariire, kaas oo lagu dilay in ka badan 47 kamid ah askarta dowlada. Sawiradan ayaa waxaa barbar socday bayaan kasoo baxay taliska ciidanka Al-Shabaab kaas oo lagu sheegay in: “Taariikdu markay ahayd 21 Shacbaan […]
DHEGEYSO:-Saaxiriin lagu dilay Gobalka Baay
laba nin oo Saaxiriin ahaa ayaa dhawaan lagu dilay Fagaare ku yaalla Buulo fallaay oo Gobalka Baay ka tirsan halkaasoo ka mid ah Deegaanda ay ka taliso Xarakada Shabaabul Mujaahidiin. Nimanaan oo odayaal ah ayaa laga soo qabtay Deegano Gobalka Baay ka tirsan iyagoo ku ku shaqeysanaya sixirka sida uu […]